Eoropa Beautiful Indrindra Railway Stations | Save A Train
Home > Travel Europe > Eoropa Beautiful Indrindra Railway Stations
Ny fiainana momba ny dia fa tsy ny toerana halehany, sy ny raharaha ireo tsara tarehy indrindra lalamby toby – izany teny izany tena marina. Raha ny ankamaroan'ny mpandeha hanatona gara toy ny toerana iaingana ny diany, dia ho hitanao fa ireo gara tena tsy hay hadinoina. Noho izany, nahoana no tsy hojerentsika telo tsara tarehy indrindra Eoropa gara?
Beautiful lalamby toby hitondra isa 1 – The Strasbourg Gare, Strasbourg, Frantsa
Frantsa Strasbourg garan'i
Near Frantsa ny atsinanana amin'ny sisin-tanin'i Alemaina, miorina ao Strasbourg no Strasbourg gara. It is the second largest in the country, and arguably the most beautiful.
Ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby dia maoderina trano fitaratra teo ivelany. Noho izany, Rehefa dingana ao anatiny, hahita ny mazava, Airy toerana tsara tarehy sy ny ara-tantara ny amin'ny gara ao anatin'ny Doe. Fiantsonan'ny fiaran-dalamby io dia manana be dia be ny tantara. Ary novohana tany 1846 ary indray ao amin'ny 1883. Ny singa fitaratra tsara tarehy boribory ho hitanao dia nanampy tao 2007 mba hiarovana ny toerana malaza.
Inona no hevitrao momba izany? dia Strasbourg mendrika ny fitsidihana?
Antwerp Central Station, Antwerp, Belzika
Antwerp Belzika garan'i
Ny teny hoe Grand tsy dia manomboka ny hamaritana Antwerp foibe fiantsonan'ny fiaran-dalamby. Ny neo-Santionan'izany fiangaly Mahagaga toa bebe kokoa tahaka ny katedraly noho ny Travel foibe. Ny Train Station dia manasongadina ihany koa ny efitrano fiandrasana malalaka vita amin'ny marbra sy ny vato, dia manasongadina ny famantaranandro lehibe, ary Voasaron'ny lehibe dome.
Zavatra tsy Belza naorina tsara tarehy noho ny fangatahan'ny Mpanjaka Leopold II sy ny momba antsika noho ny 110 taona. Ary ankehitriny, Tompon'ny maro lamasinina, intercity fiarandalamby, ary Thalys fiarandalamby haingam-pandeha. Izany no antoka iray tsy te-tara!
Olona maro no mihevitra Antwerp gara mba ho ny tsara indrindra lalamby toby avy izy rehetra.
Gara Sao Bento, Porto, Portiogaly
Porto Portiogaly garan'i
izany train station is simply gorgeous and teo am-boalohany ny Sao Bento de Ave-Maria drelijiozy sy avy any ivelany, mpandeha dia hahita fa ny trano tsara tarehy manana Paris izay ahitana fitambaran-vato fomba lafin-trano ivelany.
Ny anatiny no tena loka aza! Misy 20,000 taila izay milaza tantara avy any portogey HISTORary, tahaka ny ady tao Valdevez sy ny fanafihana an'i Ceuta. Artist Jorge Colaço nandoko ny taila for 14 taona sy ny sary amin'ny rindrina natao vita tamin'ny 1916. Tsy te ho tara izany asa ny zavakanto, na ny fiaran-dalamby! 😉
Efa nitsidika misy ireo toby lalamby tsara tarehy? Bitsika anay ny sary @SaveATrain Ready to book your next adventure? Avy eo mitsidika www.saveatrain.com
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/europes-most-beautiful-railway-stations/ - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)